в Iseluleko ngochwepheshe, Ubunjiniyela / Ubuchwepheshe
АAma-gronomers aseRussia ancoma ukudla okuphelele.
ВUmphumela ophakeme, ufakazelwe eminyakeni edlule.
РIsixazululo salabo abazi imfihlo yokuvuna okuphezulu.
Рukuthuthuka nokukhula nge-Aurora.
Аvrora. Landela ukusa!
Yini ifomula yesivuno esihle?
Lona ngumhlaba wethu. Ukuxhumana kwethu nokhokho, okwedlule kanye nekusasa lethu.
Ishidi lokulinganisela Ngaphezu kwakho konke
I-Avrora ™ igama elisha lomugqa we-EuroChem nitroammophos
Imanyolo eyinkimbinkimbi ye-NPK i-Avrora ™ yenzelwe isicelo sokuqala sokulima, kanye nesicelo ngesikhathi sokuhlwanyela nokondla izitshalo zemifino. Izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo zikuvumela ukuthi ukhethe umanyolo ofanele isivuno ngasinye futhi ucabangele izici zanoma yimuphi umhlabathi.
Ngakho-ke, ngohlelo lokusebenza oluyinhloko, imikhiqizo enokuqukethwe okungenani kwe-nitrogen (enefomu le-ammonium) nokuqukethwe okuphezulu kwe-phosphorus ne-potassium kufaneleke kakhulu.
Ngenxa yobuchwepheshe obukhethekile bokukhiqiza, umanyolo oyinkimbinkimbi we-EuroChem's Avrora ™ uqukethe:
Enye inzuzo yalezi nitroammophos yanda, uma kuqhathaniswa nama-analogues, amandla ama-granules ngaphandle kokunciphisa ukuncibilika kwawo. Ngakho-ke, ngenkathi kugcinwa ubuqotho, i-pellet ngayinye iqukethe inani elifanayo lezakhi ezibalulekile ngendlela etholakala ezitshalweni.
INitroammophoska Avrora ™ 14-1423 izibonakalise kahle ezitshalweni zikawoyela nezemifino, amazambane, futhi ibuye isetshenziswe ngempumelelo emasimini amajikijolo nasezingadini zezithelo. Ngaphezu kwalokho, iyasebenza uma isetshenziswa ngemuva kwezitshalo ezine-potassium carryover ephezulu noma emikhakheni enesifo se-potassium enhlabathini. Njengoba umkhuba ukhombisa, ukubukelwa phansi kwendima ye-potassium nobunzima ekuhloleni okuqukethwe kwamafomu atholakala enhlabathini kuvame ukuholela ekushodeni kwezitshalo.
Indlela efanelekile yokudla amazambane
Ukuthola isivuno esigcwele samazambane (50 t / ha), kuyadingeka ukuhlinzeka inhlabathi cishe nge-175 kg ye-nitrogen, 70 kg ye-phosphorus kanye ne-300 kg ye-potassium.
Isiko lisebenzisa inani elikhulu le-calcium (100 kg), i-magnesium (45 kg) nesulfure (15 kg), kanye nezinto ezidingekayo zokulandela umkhondo kumele zibe khona ekudleni.
I-nitrogen, njengesakhi esiyinhloko, iyadingeka ezigabeni zokuqala, ithuthukisa ukukhula kweziqongqo. Ukudla okuhle kwe-phosphorus kuqinisekisa ukuvuthwa komzimba kwezilimo eziyizigaxa. I-Potassium esigabeni sokugcina sonyaka okhulayo ikhuthaza ukuphuma kwezakhamzimba kusuka eziqongweni kuya ezilwaneni eziyizigaxa. Isidingo salezi zinto siyashintsha ngenkathi yokukhula. Isikhathi esibucayi kakhulu samazambane senzeka ngesikhathi sokuqaliswa kwezilimo eziyizigaxa futhi siqhubeka size sivuthwe ngokuphelele. Ngalesi sikhathi, izitshalo zizwela kakhulu ukungalingani kwezakhamzimba, izinto ezahlukahlukene zokuxineka.
Ngenxa yokugqama kwe-potassium ku-Avrora ™ 1414-23 nitroammophoska, ikulungele kakhulu ukondla amazambane. Lo mkhiqizo uzibonakalisile ezivivinyweni eziningi zensimu, uhlinzeka ngemakethe ekhuphukile kanye nekhwalithi yomkhiqizo. Kubalulekile futhi ukuthi i-potassium kulo manyolo itholakala kakhulu kwifomu le-nitrate (okuqukethwe yi-potassium chloride ngama-25% kuphela), ngakho-ke ingasetshenziswa entwasahlobo ngaphambi kokutshala noma ngqo lapho utshala isivuno. Izinga lokufakwa kwamazambane lingu-500-800 kg / ha.
Ukuhlolwa kwensimu esifundeni saseMoscow kumazambane wethebula lakuqala kukhombisile ukuthi ukusetshenziswa okuyinhloko komthamo omaphakathi (N90P90K148) нитроаммофоски Avrora™ 14-14-23 повышало урожайность картофеля на 6,0 т/га по сравнению с эквивалентной (по азоту и фосфору) дозой нитроаммофоски 16:16:16. В этом же варианте отмечены: максимальный выход товарной фракции — 51,4 т/га, что на 6,4 т/га выше стандартной нитроаммофоски; наилучшие экономические показатели — величина условного дохода повышалась на 50%, рентабельность на 8%.
Tags: 2020 No. 3Umanyolo wamamineraliamazambane umsoco
Ukuthula kwengqondo kwe-Aviko Belgium
Amapulazi amazambane esifundeni saseNovosibirsk
Amazambane agcinwa ehlonishwa kakhulu
I-DEULA-NIENBURG UNYAZI LWETHU LUPHUMELELE!
Ukupakisha: inguqulo 2020. Mayelana nemvelo, umnotho nokuncane mayelana nokuklanywa
Ibhizinisi lokukhiqiza imifino efriziwe lilungiselela ukuvula esifundeni saseLipetsk